Zvinoshungurudza Vanhu Nezve Emails | Martech Zone
Zvinotsamwisa Vanhu Nezve Emails
Chipiri, August 23, 2011 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Ivo vanhu paCCLoop vaisa pamwechete iyi infographic pane izvo zvinogumbura vanhu nezve email.
95% yeUS online vatengi vanoshandisa email yekutaurirana uye bhizinesi. Chishandiso chikuru chekudyidzana nekusvika kune vatsva, varipo, uye venguva yemberi vatengi. Zvisinei, email haisi kunze kwekugumbura kwayo. Zvisinei nenyaya idzi, email haina kumbobvira yatsiviwa uye icharamba ichikura mumakore anotevera. Zvichiri kusagutsikana? Iyo infographic pazasi inogona kuchinja pfungwa dzako:
Katsamba kamwe pane izvi… ndinogona kusundira kumashure zvishoma kuti email yakamirira iwe uye inokodzera muhurongwa hwako. Zvinotarisirwa paemail zvave zvakareba chaizvo mazuva ano. Kana ndikasapindura email mukati memaawa evamwe vatengi vangu, zvinoteverwa neizwi rezwi, chats, facebook zvinyorwa, mameseji… argh!
Zvishandiso makumi mana, 40 Slides, 40 Maminitsi
Vhidhiyo: Kushambadzira Kunogadzira Chigadzirwa Here?